वातावरणसँग उद्योगको सम्बन्ध | गृहपृष्ठ
Home व्यक्तित्व अर्थान्तर वातावरणसँग उद्योगको सम्बन्ध
अर्थान्तर 50 views
महानिर्देशक, वातावरण विभाग
दुर्गाप्रसाद दवाडीको जन्म विसं. २०१८ मा चितवनमा भएको हो । विसं २०६१ सालमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुरबाट कृषि विषयमा एमएस्सी गरेका दवाडी नेपाल सरकारको निजामती सेवामा २०४४ मा कृषि सेवा बालीरोग विज्ञका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । विभिन्न क्षेत्रमा काम गरी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हुँदै २०७२ पुसदेखि उनी वातावरण विभागमा महानिर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनीसँग कृषिसेवाको लामो अनुभव छ ।
वातावरण प्रदूषणमा उद्योगको भूमिका
नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । वातावरणमा ध्यान नदिई गरिएको कुनै पनि विकास दिगो हुन सक्दैन र यसले मानव समुदायमा नै गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । तसर्थ, वातावरण संरक्षण कार्यले एकल जिम्मेवारीभन्दा पनि सामूहिक जिम्मेवारीको आवश्यकता महसूस गरेको हुन्छ । त्यसैले व्यक्ति स्वयंदेखि संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गरेमा मात्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
व्यक्तिको जिम्मेवारीअन्तर्गत आफ्नो वरिपरि सफा राख्ने, फोहोर जथाभावी नफ्याँक्ने, फोहर जलाई वातावरण दूषित हुन नदिने, प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगर्नेजस्ता कार्यहरूले प्राथमिकता पाएका हुन्छन् भने संस्थागत जिम्मेवारीमा आफूले सञ्चालन गरेको व्यवसायले वातावरणमा केकस्तो प्रभाव पारेको छ हेक्का राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुजस्ता कार्य पर्छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य आवश्यक शर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।
तर, आजकाल मानिसमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रतिबद्धता गर्ने तर व्यवहारमा वातावरणको ख्याल नगरी वा आफू कसरी बढी कमाउने भन्नेतर्फ मात्र ध्यान दिएको पाइन्छ । यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि अस्पताललाई लिन सकिन्छ । बिरामीलाई निको बनाउने यस्तो पवित्र संस्थाले नै फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । औषधिको उपचारमा प्रयोग भएका विभिन्न सामानबाट निस्कने कतिपय फोहोर रोगीको शरीरबाट निस्कने भएकाले सहजै रोग अन्य व्यक्तिमा सर्ने हुन्छ । यसको व्यवस्थापन ठीक ढङ्गबाट नभएको अवस्थामा रोग झनै फैलन सक्छ । यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाले लिने कि नलिने ? यस अवस्थामा अस्पताल खोल्दैमा रोग निको हुन्छ भन्ने मान्यता ठीक होइन । रोग बढाउने खालका अस्पतालको हामीलाई आवश्यक छैन । यस्तै विकासको नाममा बाटो, ढल, खानेपानी विस्तार वा नयाँनयाँ कलकारखाना आदि निर्माण गर्दा त्यसले वातावरण धूलाम्य बनाउने, धूवाँले दुर्गन्ध छर्ने, ठूलो आवाजले ध्वनिप्रदूषण गर्ने आदि कार्यबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ । हामीलाई त्यस प्रकारको विकास आवश्यक छैन । हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यलाई कुनै असर नगरी गरिने दिगो विकास चाहिएको छ । त्यस्तै, ठूलाठूला उद्योग, कारखानाले भारी परिमाणमा फोहोर पानी निष्कासन गरी खोलामा वा यत्रतत्र फ्याँकेको पाइन्छ । यसले जैविक वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर निम्त्याउन सक्छ । उद्योग, कारखाना खोल्नेले पानी प्रशोधन गरी स्वस्थ पानी मात्र खोलामा फ्याँक्ने काम गर्ने कि नगर्ने ? नेपाल सरकारले विभिन्न मापदण्डहरू निर्माण गरेको छ । कानूनमा जे लेखे पनि कानून उल्लङ्घन गरेर बहादुरी गरेँ भन्नेले ख्याल गरे हुन्छ, त्यसले आफैलाई नोक्सान गरिरहेको छ । त्यस्तै, हाल नेपालमा पर्यटक भित्र्याउने नाममा ठूलाठूला होटल खुलेका छन् । यी होटलले फ्याँक्ने फोहर पानी प्रशोधन गरी आफ्नै बगैंचामा प्रयोग गरेमा हरियाली र स्वच्छ वातावरणसमेत हुने कुरोलाई ख्याल नगरी विनाप्रशोधन नगरपालिकाको ढलमा जोड्नु के हाम्रो हितमा छ ?
चाहे राष्ट्रिय उद्योग होस् वा अन्तरराष्ट्रिय उद्योग होस्, होटल ठूलो होस् वा सानो होस, आयोजना ठूलो होस् या सानो होस् वातावरण प्रदूषण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हक हुँदैन । व्यवसाय वातावरणमैत्री हुनु आवश्यक छ । यदि वातावरण मैत्री गर्न नसक्ने हो भने उद्योग, कलकारखाना अथवा व्यवसाय नखोले हुन्छ । जसले वातावरणमैत्री काम गर्न सक्छ, त्यो मात्र हामीलाई चाहिन्छ अरू हामीलाई आवश्यक छैन ।
प्रदूषकले नै सफा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । यो विश्वव्यापी मान्यतालाई ख्याल नगरी केबल कमाउने मात्र उद्देश्य लिएमा अन्त्यमा यसले स्वयम् उद्योेगी तथा व्यवसायीलाई समेत बाँकी राख्दैन ।
हो, हामी वातावरणविद्हरू विकासविरोधी होइनौं तर, विकास गरेको छु, रोजगारी दिएको छु, भन्ने बहानामा हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विकास हामीलाई आवश्यक छैन । वातावरण संरक्षणमा खर्च गर्नु भनेको फजुल होइन, हाम्रा भावी सन्ततिलाई हाम्रा पुर्खाले दिएको नासो यो सुन्दर प्रकृति जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । प्रकृतिलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी गरिने विकास मात्र हामीलाई चाहिएको छ ।
यसर्थ, वातावरण संरक्षण गर्न एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । स्वयम् व्यक्ति, संस्था, उद्योेग, कारखाना, अस्पताल तथा विभिन्न आयोजनाहरू प्रदूषण शून्यसहनशीलता अपनाउन सकेमात्र हामी यो सुन्दर प्रकृति हाम्रो भावी सन्ततिलाई बुझाउन सक्छौं, अन्यथा दिगो विकास हैन विनाश मात्र हुनेछ । यसैले यो हाम्रो सामूहिक दायित्व हो, सामूहिक दायित्व पूरा गरी स्वस्थ, सुन्दर समाज निर्माणमा एकजुट भई सामूहिक दायित्वमा एक जुट हौं ।
उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्थिति
जनस्वास्थ्य विज्ञ, काठमाडौंको वायुप्रदूषण
हामी प्रदूषणले आक्रान्त भएका छौं । जताततै फोहोर धूलो, धूवाँ, खाद्य मिसावट, दूषित पानी, विषदीयुक्त तरकारी हाम्रा दिनचर्या भएका छन् । यो रोगले राजधानी मात्रै सीमित नभएर अन्य ठूलासाना शहरदेखि गाउँसम्म फैलिँदै गएको छ । धेरै प्रकारका प्रदूषणमध्ये मानव समुदाय सबैलाई बराबरी प्रभाव पार्ने प्रदूषण वायुप्रदूषण हो । वायुप्रदूषणको प्रभावले के धनी के गरीब सबैलाई सताउँछ । नेपालको ठूला शहरमध्ये काठमाडौं खाल्डो त विषैविषले भरिएको कचौराजस्तो भइसकेको छ । सडक विस्तार, खानेपानी विस्तारलगायत कामहरूले भत्काएका बाटाले प्रदूषण गराउन थप मद्दत गरेका छन् । जताततै मुखमा मास्क लगाएका मानिसको भीड छ । राजधानी वासीहरू कुहिरी मण्डल धूलो र धूँवाको मुस्लोमा बाँच्न बाध्य छन् ।
यस्तो प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे खासै चासो भएको र वायुप्रदूषण नियन्त्रणमा केही पनि भएको सुनिएको छैन । वायुप्रदूषणले हाम्रो शरीरमा पार्ने प्रभावहरूका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान भइसकेको छ । वायुप्रदूषण भनेको हाम्रो शरीरलाई हानि गर्ने धेरै प्रकारका कणको मिश्रण हो । हावामा भएका त्यस्ता कण शरीरमा प्रवेश गरेपछि ती कणले शरीरमा हानि पुर्‍याउन थाल्छ ।
राजधानीको आकाशमा पाइने हावामा ब्ल्याक कार्बोन, सल्फेट, नाइट्रेटलगायत थुपै रासायनिक पदार्थ पाइन्छन् । त्यस्ता कण कपालको ७० गुणा सानो आकारका हुन्छन् । त्यस्ता कण श्वास लिँदा सोझै फोक्सोसम्म पुग्छ र फोक्सोबाट रक्त सञ्चारप्रणालीमार्फत शरीरको सम्पूर्ण भागमा पुग्छन् । त्यसरी पुगेको वायुले छाला, आँखा वा शरीरको बाह्य अङ्गमा मात्र समस्या नबनाई शरीरका हरेक अङ्गमा स्वास्थ्य समस्याहरू ल्याउन सक्छ । अहिले सम्मको अनुसन्धानले हावामा भएका त्यस्ता खराब कणको ७२ प्रतिशतमा मुटु तथा रक्त सञ्चारसम्बन्धी समस्या देखा परेका छन् । त्यस्तै १४ प्रतिशत क्यान्सर र बाँकी १४ प्रतिशतमा फोक्सोसम्बन्धी समस्या हुने गरेको छ । विश्वमा मुत्युको प्रमुख कारण मुटुसम्बन्धी समस्या नेपालका लागि पनि पहिलो हो । यसमा वायुप्रदूषणको मुख्य भूमिका छ भन्ने यो तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ ।
वायुप्रदूषणको प्रमुख कारण सवारीसाधनबाट निस्कने धूलो र इँटा भट्टाको धूँवा हो । काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी रूपमा स्थापना गरिएका इँटा भट्टाले प्रदूषण गर्न ठूलो भूमिका छ । त्यसैले वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको सवारीसाधनको सङ्ख्या घटाउने र काठमाडौंभित्र रहेका इँटा उद्योगलाई काठमाडौं बाहिर विस्थापन गर्नु हो । अहिलेको सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले वायुप्रदूषणका कारण सास्ती खेपिरहेका राजधानी बासीहरूले धूलो छेक्न प्रयोग गरिएको मास्कले धूलो, धूँवाका अत्यधिक साना कण छेक्न सक्दैन । त्यस्ता साना कडा फोक्सोभित्र सजिलै पुग्छ । कागजबाट तयार गरिएको पेपर माक्सले केही हदसम्म छेक्न मद्दत गरे पनि ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सबैको सहयोग र प्रतिबद्धताबाट वायुप्रदूषणलाई कम गर्न सबै आआप्mनो ठाउँमा सचेत र राम्रो कामका लागि सहभागी हुनु जरुरी छ ।
प्लाष्टिक उद्योगबाट वातावरण प्रदूषण हुँदैन
अध्यक्ष, नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक सङ्घ
आधुनिका युगमा प्लाष्टिकको महत्त्व र योगदान अतुलनीय छ । प्लाष्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रयोगले व्यापक क्षेत्र ओगट्दै आएको सबैलाई सर्वविदितै छ । तर, आम मानिसको आवश्यकता र उपयोगिताको यस उद्योगलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी कानूनी रूपमा इजाजत लिएर स्थापित उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाउनु कहाँसम्म उपयुक्त हुन्छ ?
नेपाल सरकारले २०७१ चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७२ वैशाख १ बाट लागू हुने भन्दै काठमाडौं उपत्यका चार किल्लाभित्र प्लाष्टिकका झोला बन्द गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, त्यतिबेलासम्म उद्योग खोल्न भने रोकेको थिएन । यो भन्दा अघिको केपी ओली सरकारले २०७३ सालको बजेट भाषणमा नेपाल मुलुकभर प्लाष्टिकका झोला विक्रीवितरण र ओसारपसार गर्न नपाउने निर्णय गर्‍यो । यसबाट पूर्णरूपमा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबेला पोलीप्रोपोन प्लाष्टिक पनि विक्रीवितरण गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसले धेरै उद्योग प्रभावित भए र नेपालका उद्योगले भारत र चीनबाट यस्ता सामान आयात गरे ।
सरकारले प्लाष्टिक बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि वातावरण र केही एनजीओका व्यक्तिहरू पूर्णरूपले लागेका थिए । बैङ्कबाट कर्जा लिएर उद्योग खोलेकाहरू टाट पल्टिए । त्यतिबेला एकाएक सरकारले आतङ्क मच्चाएको थियो । यसरी उद्योग बन्द गर्दै जाने हो भने प्लाष्टिक उद्योगको ५ अर्बको लगानी डुब्छ । त्यसका साथै २० हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुम्छ । त्यतिबेला सर्वसाधारण जनताको पनि लगानी रहेको बैङ्कमा प्लाष्टिक उद्योगले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको थियो । प्लाष्टिक उद्योगले सरकारको तोकिएको नियम तथा मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग खोलेका हुन् । सरकारले पनि प्लाष्टिक उद्योगको लागि भनेर निर्देशिका पनि ल्याएको थियो । त्यो निर्देशिका २०६८ र २०७१ मा संशोधन गरियो । तर, एकाएक यसरी उद्योग बन्द गर्ने निर्णय हुनु प्लाष्टिक उद्योगीका सुखद रहेन । यदि प्लाष्टिक उद्योग गलतै थियो भने किन त्यसरी निर्देशिका ल्याइयो ?
मानिसले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण वस्तु प्लाष्टिकबाट बनेको हुन्छ । प्लाष्टिकको नराम्रो पक्ष भनेको मानिसले प्रयोग गर्न नसकेर भएको हो । प्लाष्टिक उद्योगले प्रदूषण गरेको होइन । यसमा जिम्मेवार निकाय राज्य हो । राज्यले फोहोर फाल्नेलाई कडा नियम लगाइदिनुपर्छ । प्लाष्टिक प्रयोगमा कडा नियम जारी भयो भने हाम्रो बानी परिवर्तन भइहान्ने विषय हो । तर, एक्कासि उद्योगलाई धराशयी पारेर बन्द गर्नु मूर्खताबाहेक अरू होइन ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कुहिने वस्तु र नकुहिने वस्तु छुट्याइन्छ । बरु प्लाष्टिक उद्योगले कानून कार्यान्वयन र प्रचारप्रसार गर्न भनी ५ प्रतिशत बढी कर लगाउँदा तिर्न तयार छ । प्लाष्टिकका विषयमा नागरिकमा जनचेतना जगाउन जरूरी छ । अहिले प्लाष्टिकका झोला चीन र भारतबाट आइरहेका छन् । नेपाली उद्योगले सामान प्याक गर्ने साना र ठूला प्लाष्टिक भारत र चीनबाट ल्याउने गरेका छन् । तर, नेपाली उद्योग बन्द गरिएको छ ।
सरकारलाई प्लाष्टिक उद्योगीले प्लाष्टिकलाई फोहोर होइन मोहोर भन्न चाहन्छ । प्लाष्टिकलाई जम्मा गरेर पुनः प्रयोग गर्न सक्छौं । सरकारले रिसाइकल उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेमा त्यसमा फालिने प्लाष्टिक पुनः प्रयोग हुन्छ । यसमा पातालो प्लाष्टिक उत्पादन बन्द गरेर ३० माइक्रोनको मात्र प्लाष्टिक उत्पादन बनाइदिँदा उपयुक्त हुन्छ । नेपालमै प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालिएको उदाहरण छन् । प्लाष्टिकबाट सडक बनाएको उदाहरण भारतमा छ ।
कतिपय नागरिकलाई उद्योग सञ्चालनले गर्दा प्रदूषण हुन्छ भन्ने लागेको होला । तर, उद्योगबाट वातावरण प्रदूषण हुँदैन । उद्योगबाट निस्कने प्लाष्टिकलाई पुनः प्रयोग गरिन्छ । बाहिर बजारमा बेचिने प्लाष्टिकलाई पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ ।
पर्यावरणमैत्री लगानी नीति ल्याउनुपर्छ
अध्यक्ष, निम्बस समूह
विकासको मोडलमा अहिलेसम्म पर्यावरणको कुरा भए पनि प्राथमिकता पाएको छैन । उद्यमका आयाममा लगानी ल्याउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । तर, पर्यावरण ओझेलमा पर्दै आएको छ । शास्त्र र व्यवहारले संसारको संरचना पञ्चतŒव (पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि र वायु)बाट भएको मानेको छ । यी पाँच तत्त्वको प्रदूषण र संवर्द्धन नै पर्यावरणको विषय हो । परम्पराले पर्यावरणलाई साथमा लिएकोमा अहिलेको आधुनिकताले त्यसलाई छोडेकोमात्र छैन, विनाशका अवयवहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन् । खासगरी १९ र २० औं शताव्दीमा पर्यावरणलाई बिगार्ने काम बढी भएको पाइन्छ । यो कालखण्डमा भौतिक अवश्यकताको पूर्तिका निम्ति पर्यावरण विनाश तीव्र बढेको हो ।
हाम्रो जीवनशैलीले पर्यावरण बिगारेको छ । पर्यावरणको क्षयीकरणमा उद्योग, कृषि र पर्यटनको भूमिका छ । परिमाण फरक हुन सक्छ, तर विनाशको काम सबैले गरेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रमा कोइलाजनित उद्योग, खनिज तेलको प्रयोग, सवारीका साधन, उद्योग कलकारखानाको रसायनयुक्त निकासले पर्यावरण दूषित बनाएको छ । सडक बनाउँदा वनजङ्गल मासिएको छ । यसले जङ्गली जनावर र वर्षा प्रभावित भएको छ । यस्ता विकासका कामसित पर्यावरणको सम्बन्ध जोडिएको छ ।
कृषिमा रासायनिक खादको प्रयोगले वातावरण दूषित भइरहेको छ । वायुमण्डलमा बढ्दो तापमानले पानीका स्रोत र नदीका प्राकृतिक मुहान सुक्दै गएका छन् । हिमालयको हिउँ रित्तिदै छ । पानीको स्रोत सीमित हुँदै जाँदा साना स्रोतबाट जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने सम्भावना छ । ठूला नदीमा आधारित योजनामा पर्यावरणीय साथै भौतिक जोखीम बढ्ने अवस्था हुन सक्छ । वायुप्रदूषण बढ्दो छ । छिमेकी चीन र भारतका कतिपय शहरमा जाडो यामका बस्न योग्य नै हुन छाडेका छन् । हाम्रै काठमाडौंको वायु पनि बिग्रिँदै गएका तथ्य आएका छन् । यो पर्यावरण विनाशको परिणाम हो ।
अहिलेसम्म पनि पर्यावरणलाई दोस्रो पुस्ताको आवश्यकता ठानिएको छ । पहिलो पुस्ताको आवश्यकता उद्योग, कृषि, पर्यटन र आयका अन्य आयामहरू हुन् भन्ने छ । उद्योग लगाउँदा पूरा गरिने पर्यावरण संरक्षणका प्रक्रिया कर्मकाण्डजस्तो भएको छ । पर्यावरण बचाउका उपायबारे पर्याप्त जानकारीसमेत छैन । यथार्थमा अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रकारको गृहकार्य भएकै छैन ।
अन्य देशको तुलनामा नेपालको पर्यावरण त्यति नबिग्रिएकाले अबको लगानी पर्यावरणमैत्री हुनुपर्छ । यो सम्भव पनि छ । कुनै पनि उद्यममा लगानी पर्यावरणमैत्री भएन भने त्यस्तो लगानी अस्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तो विरलै उद्यम होला, जसको लगानी पर्यावरणमैत्री बनाउन नसकियोस् । पर्यावरणमैत्री प्रविधि आइसकेको छ । तत्कालका लागि प्रविधिमा लगानी बढे पनि यसले दीर्घकालका लागि लाभ हुन्छ । पर्यावरणलाई मुख्य अभीष्ट बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पर्यावरण नबिग्रिने गरी लगानी नीतिको निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्छ । अबको विकास नीतिले पर्यावरण संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ ।
हाम्रो क्लोज सर्किट मिल हो
रिलेशनशिप मेनेजर, गोयनका समूह
हाम्रो मान्यता सिमेण्ट उद्योग मात्र नभएर सबै उद्योग नै वातावरमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हो । गोयनका सिमेण्ट उद्योग विसं २०६६ सालमा स्थापना भएको हो । त्यति बेला उद्योग स्थापना गर्दा क्लोज सर्किट मिल भनेर स्थापना गरेका थियौं । त्यस्ता मिल वातावरणमैत्री हुन्छन् । पश्चिम नेपालको पहिलो क्लोज सर्किट मिल गोयन्का समूहकैै हो ।
हाम्रो उद्योगले वातावरणमैत्री नै भएर इन्भाइरोन्मेण्ट म्यानेजमेण्ट सर्भिसेज प्रालिबाट भर्खरै इनर्जी अडिट गराएको थियो । उद्योगको इण्डष्ट्रियल इन्भाइरोन्मेण्ट मनिटरिङ रिपोर्ट सकारात्मकै आएको छ । त्यसमा प्रदूषणका लागि फरक प्यारामिटरहरू चेक गर्ने गरिएको छ । प्यारामिटरमा मुख्यतया वायुको गुणस्तर, धूँवा ध्वनिको मापदण्ड, उद्योगबाट निस्कने तरल पदार्थ पर्छ । त्यसमा विभिन्न ग्यासका बारेमा जाँच गरिन्छ । धूलो कत्तिको उडेको छ छैन भन्ने विषय पनि समेटिन्छ । उद्योगबाट उड्ने धूलो कम पाइएको छ । तर, बाहिरी रूपमा जस्तै वेयर हाउस र अन्य सामान लोड अनलोड गर्दा भने केही धूलो उडेको रिपोट आएको छ । त्यसलाई पनि हामीले कम गर्दै लैजाने छौं । नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको वातावरणमैत्री मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ ।
ध्वनिप्रदूषण नियन्त्रण गर्न वृक्षरोपण गरिएको छ । उद्योग सञ्चानल भएका बेला क्लोज सर्किट मिलको अवधारणअनुसार १० ओटा एयर फिल्टर जडान गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो उद्योग वातावरणमैत्री रहेको छ ।
७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०६:०९
२३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:४०
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:२५
९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:१९